Isixeko lesiprofeto zaseYerusalem | Apg29
Isixeko lesiprofeto zaseYerusalem
Onke amaKristu afanele kuyibona iYerusalem ngendlela lesiprofeto.
UThixo unyule iYerusalem. Kuzo zonke izixeko ehlabathini lo mzi ukuba olukhethiweyo.
Jonga lesiprofeto eYerusalem
Onke amaKristu afanele kuyibona iYerusalem ngendlela lesiprofeto. Ukuba senjenjalo, siya siqonde icebo likaThixo kulo mzi.
Xa US waqonda eYerusalem capital yamaSirayeli wema reactions iikati nezinja. Ihlabathi liphela Kuyabonakala ukuba izimvo zabo ngayo. Ukusuka eziphezulu nezisezantsi, ukususela Abalawuli kubasebenzi kumagumbi lasemini baxoxe ukuba kwenzeke ntoni.
Kubonakala ukuba imbambano ebalulekileyo echaphazela wonke. Ngandlel 'ithile, oko kukuthi, makhe ukuchaza. Ukuba iye malunga nasiphi na esinye isixeko zange akhuphe inxaxheba ezininzi, kodwa yiYerusalem ke, kubonakala ukuba kukho unxibelelwano abantu kumazwe ezahlukeneyo ehlabathini jikelele.
Kokubonisa woThixo ophilileyo
Xa siyibona, kunyanzelekile ukuba uqonde ukuba kukho unxulumano kuThixo ophilileyo, kakhulu. Uye wathi ukuba ukhethe kulo mzi, funda: 1 Kum. 11:36, 2 Gan. 6: 6 no Sak. 3: 2.
1 King. 11:36. Unyana wakhe ndimnike isizwe esinye, ukuze isicaka sam uDavide sibe nesibane yonke phambi kwam eYerusalem, umzi endiwunyulileyo ukuba ndibeke khona igama lam.
2 Gan. 6: 6 Kodwa iYerusalem endiyinyulileyo ngenxa yegama lam, ukuba libe khona, ndaza ndanyula uDavide ukuba abe phezu kwabantu bam amaSirayeli.
Zak. 3: 2. Kodwa uSathana wathi uNdikhoyo: "UNdikhoyo uya kukohlwaya, uSathana Ewe, uYehova uya kumohlwaya, yena lowo ukhetha iYerusalem Ngaba lo akasikhuni esirholwe emlilweni..?"
Kwezi vesi sifunda ukuba uThixo unyule iYerusalem. Kuzo zonke izixeko ehlabathini lo mzi ukuba olukhethiweyo.
UYesu uza kubuya eYerusalem
UThixo sele lubonise ukuba oko ukwenzile. Kwafuneka uSolomon wakha itempile ngokwabo kwesi sixeko, akwasala unyana wakhe uYesu, ukuba afele izono eYerusalem. Kodwa kuya kubeka igama lakhe eYerusalem. Uya kuthuma uYesu wabuyela edolophini ambathe iinyawo zakhe phezu kweNtaba yemiNquma, Zek. 14: 4
Ngosuku uya kuma iinyawo zakhe phezu kweNtaba yemiNquma, malungana kweJerusalem ngasempuma. Ke yona iNtaba yemiNquma iya kwahlulwa kubini, ukusuka empuma kuye entshona, ukuba intlambo enkulu gqitha Isiqingatha sentaba sisinge entla nesiqingatha ukuya ngasemzantsi.
Xa le ukubuya kuthatha indawo, apho liya kuba mkhulu, njengokuba sibona kule vesi. Lo mcimbi uza kuzisa indlela entsha ngokupheleleyo kwimbali yabantu. Ukususela kulo mzi, uYesu uya kuba ngukumkani, uMika. 4: 7
Ndiya kunizisa abe abaseleyo, wabuyisa kude abe luhlanga olunamandla, kwaye iNkosi iya kuba ngukumkani phezu kwabo eNtabeni yeZiyon, ukususela ngoku kuse ephakadeni.
Ezi umxholo zeBhayibhile ubonisa kugxininiswa ecacileyo kwisicwangciso uThixo akupha sona eYerusalem ukutyhubela iminyaka. Siphila kwixesha lethu kwisigaba ekhethekileyo kwesi sicwangciso. Ekubeni amaYuda wabuyela kwilizwe lakhe zombini kunye kwisixeko saseYerusalem, oko kuya kukhokelela ekubeni izinto ezinkulu kakhulu ngazo ngqondweni ngoku ukuba kusondele.
IYerusalem ndiyenza ibe yindebe lokungcangcazela
Kukho enyanisweni iinkcukacha ezininzi zichaziwe ilizwi lesiprofeto yaye umzabalazo eye behamba befuna umzi. Le nto-nye uThixo umprofeti uZekariya:
"A siprofeto, ilizwi * likaNdikhoyo ngamaSirayeli. Utsho uYehova, Ngubani na lo zaneka izulu Waliseka ihlabathi yaye ayila umoya yabantu kuyo, Yabona, iYerusalem ndiyenza ibe yindebe enombilini, yokuhexisa zonke izizwe ngeenxa zonke. Naye uYuda uya ubunzima, xa iYerusalem wayingqinga. "Zek. 12: 1.
Oku sele kunokuthiwa ezenzekileyo. Siye sabona indlela amazwe wafuna ukuya eYerusalem ukususela ngo-1948.
IYerusalem capital likaSirayeli
Kodwa vesi elilandelayo, sibona amazwe angabamelwane ukuba kuphela bengenelela nomba eYerusalem;
"Kuya kuthi ngaloo mini iYerusalem ndiyenze ilitye elinzima kuzo zonke izizwe. Nabani umphakamisi uya azenzakalise phezu kwalo. Kwaye wonke umntu emhlabeni baya kuhlanganisana nxamnye nayo. "Zek. 12 ngomzuzwana
Ukubaluleka yeyokuba sijongene isiganeko elandelayo enkulu esichazwe Unobangela. 12, ukuba ukubuya kukaYesu. Lixesha lokuba ukuqonda intsingiselo ilizwi lesiprofeto likaThixo.
Eli nqaku a blog guest ogama izimvo yeyethu yombhali.